श्रीमतीको १६ जनासँग अवैध यौ’न स’म्बन्ध, श्रीमानले एक झट्कामा सबैसँग लिए यसरी बदला ! – Online Khabar 24
श्रीमतीको १६ जनासँग अवैध यौ’न स’म्बन्ध, श्रीमानले एक झट्कामा सबैसँग लिए यसरी बदला !
आफूलाई धोका दिएर परपुरुषसँग अवै’ध सम्बन्ध राख्ने श्रीमती र उनका १६ जना ब्वाइफ्रेण्डसँग श्रीमानले एक झट्कामा यसरी ब’दला लिए कि अहिले उनको सर्वत्र तारिफ भइरहेको छ ।
घ’ना जिम्बाब्बेको राजधानी हरारेको हो । एर्करिडाइस मकोमो र मुनशे चारलेन नेकुबको विवाह भएको ४ वर्ष भइसकेको छ ।
जिम्बाब्बेको प्रमुख वेबसाइट आइहरारेका अनुसार मकोमो विगत केही दिन अघिदेखि आफ्नी पत्नीको व्यवहारमा परिवर्तन महसुस गरिरहेका थिए ।
उनकी पत्नी ‘पेट दुखेको बताउँदै उनीसँग शा’री’रिक स’म्बन्धको लागि अ’स्वीकार गर्न लागेकी थिइन् । यी सबै कुराहरुका कारण मकोमो निकै त’नावमा थए । अचानक एक दिन उनकी पत्नी’को फोन उनको हात लाग्यो । पत्नीको फोन हेर्दा उनको हो’श उ’ड्यो ।
पत्नीको ह्वाट्सएप च्याटबाट उनले थाहा पाए कि उनकी पत्नीको १६ जना पुरुषँग अ’वैध यौ’न स’म्बन्ध थियो । पत्नीको च्याटमा अ’श्ली’ल कुराकानी र न’ग्न तस्वीर भरिभराउ देखेपछि मकोमोले निकै मुस्किलले आफूलाई सम्हाले । ह्वा’ट्सएप च्या’टबाट थाहा भयो, केही दिनअघि मकोमो कामको लागि बाहिर गएका बेला उनकी पत्नीले एक ब्वाइफ्रेण्डसँग ३ दिन बिताएकी थिइन् । यी सब कुराले मको’मोलाई यति धक्का लाग्यो कि उनले प’त्नीलाई पाठ पढाउने निश्चय गरे ।
मकोमो आफ्नो कहा’नी लिएर एक प्रकाशन गृहमा पुगे । मकोमोले आफ्नो दुः’ख एक अनलाइन प्रकाशन गृहको अगाडि बयान गरे र पूरै विवरण सहित त्यसलाई छाप्न भने । मकोमोले प्रकाशनलाई भने ‘पत्नीका १६ ब्वाइ फ्रेण्डसँगको च्याट देखेर मलाई जीवनको सबैभन्दा ठूलो ध’क्का लाग्यो । यीमध्ये केही च्याट त ह्वा’ट्सएपको हिडन फिचरमा थिए ।’
मकोमोले अगाडि भने ‘पत्नीलाई मसँग शा’री’रिक सम्ब’न्धमा अब रुचि रहेन । उनी कुनै न कुनै बहाना बनाएर मसँग सम्बन्ध राख्न अस्वी’कार गर्थिन् । जबमि आफ्ना ह्वा’ट्सएप ब्वाइफ्रेण्डहरुसँग खुसी थिइन् ।’ रं’गेहा’त स’मातिएपछि र प्रकाशन गृहसम्म कुरा पुगेपछि मको’मोकी पत्नीले निकै हंगामा गरिन् र आफ्नो सफाइमा कैयौं कुरा भन्ने को’सिस गरिन् ।
दि’ल टु’टेपछि दुखी मकोमोले आफ्नी पत्नी र उनका १६ ब्वाइफ्रेण्डको सबै च्याट सामाजिक सं’जालमा लिक गरिदिए । मकोमोले भने ‘चार वर्षको विवाहित जीवनमा मैले पत्नीका सबै इ’च्छा पूरा गरें । उनले जे चाहिन् मैले दिएँ र बदलामा मैले यो सब पाएँ ।’ यो पूरै कहानी अनलाइन छा’एपछि मकोमोकी पत्नी नेकुबको साथमा उनका १६ जना ब्वाइफ्रे’ण्डलाई बे’इज्ज’तीले बाँच्नै कठि’न भएको छ ।
रंगनाइ फोरिची नामका ब्वाइ’फ्रेण्डले प्रकाशन गृहलाई आफूलाई पहिले नेकुब वि’वाहित हुन् भन्ने थाहै नभएको बताएका छन् । तवांदा नामका ब्वाइफ्रेण्डले आफू र नेकुब साथीमात्र भएको दावी गरेका छन् । खबरबाट पन्छिँदै एक अन्य ब्वाइफ्रेण्डले त नेकुब आफ्नो नभइ आफ्ना साथीकी गर्नफ्रेण्ड भएको बताएका छन् । नाम र च्याटका साथ खबर छापिएपछि नेकुबसँगै उनका सबै ब्वाइफ्रेण्ड तना’बमा छन् । यद्यपि यीमध्ये धेरैजसोले नेकुबसँग आफ्नो सम्बन्धको खबरलाई अस्वी’कार गरेका छन् । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevजहाँ पाइन्छन् भाडामा प्रेमीका, १७ रुपैंयामा पाइने यि प्रेमीकासँग प्रेमीले के के गर्न पाउँछन् ?
nextमेरो दुई प्रतिशत सम्पत्तिले संसारकाे भोकमरी अन्त्य हुन्छ भने टेस्ला बेच्छु : एलन मस्क